मानव सभ्यतालाई कलङ्कित र स्तब्ध पार्ने हिंसाका घटनालाई सरकारले गम्भीररूपमा लिनुपर्छ-डा. डीआर उपाध्याय - Pura Samachar
मानव सभ्यतालाई कलङ्कित र स्तब्ध पार्ने हिंसाका घटनालाई सरकारले गम्भीररूपमा लिनुपर्छ-डा. डीआर उपाध्याय
फागुन ४ ।
पछिल्लो समय हिंसाका घटनामा कमि आउनुको साटो झन झन बढ्दो छ । महिलामाथि हुने हिंसा अझै रोकिएको छैन । यो २१औं शताव्दीमा पनि महिला हिंसा बढिरहेका छन् । चेतनाको अभावले यी र यस्ता घटनाहरु घटिरहेका छन् । कुनै पनि महिला कुनै क्षण ढुक्कसँग घरबाट बाहिर हिंड्न सकिरहेका छैनन् । महिला सुरक्षाको प्रश्न फेरि गम्भीर रूपमा उठेको छ ।
बैतडी जिल्लाको दोगडाकेदार–७ चडेपानीकी १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको समाचार छ । यस घटनाले समग्र महिला सुरक्षाको विषयमा थप चुनौति थपिएको छ । अब राज्य र सरोकारवाला सबै निकाय गम्भिर बन्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । यो घटनाले फेरि सबैलाई झसङ्ग पारेको छ । राज्यका विभिन्न निकाय र महिला अधिकारकर्मीहरू यस विषयमा गम्भिर बन्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । राज्यले सत्यतथ्य छानबिन गरि अपराधीलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ । र, पिडित परिवारलाई न्याय दिलाउनु पर्छ । यस्ता घटनाहरु बारम्बार घट्ने गरेका छन् ।
देशमा कानून फितलो हुँदा अपराधीको मनोवल बढिरहेको अवस्था छ । अब संविधान संसोधन गरेर भएपनि बलत्कारी तथा अपराधीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने कानून बनाउनुपर्छ । विश्वका केही देशमा बलत्कारी तथा अपराधीलाई कारवाही गर्ने कठोर कानून भएको हुँदा यस्ता घटनाहरु बारम्बार दोहोरिएका हुँदैनन् । यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिनाले हाम्रा छोरीचेलीले आफ्नै घर र समाजमा असुरक्षित महसुस गरेका छन् ।
महिला हक अधिकारका लागि काम गर्ने महिला अधिकारकर्मीहरु जब यस्ता घटना घट्छन् अनि वक्तव्यबाजी र सडक आन्दोलन गर्छन् । पिडित परिवारले न्याय र दोषीलाई कारबाही नहुञ्जेलसम्म महिला अधिकारकर्मीहरू न्यायको निम्ति लडिरहनु पर्छ । निर्मला हत्या काण्डका दोषी समेत अझै पत्ता लागेको अवस्था छैन । यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । समाजमा लुकेका र लुकाइएका बलत्कारका घटनाहरु प्रशस्त मात्रमा सुनिन्छन् । राज्य संयन्त्र पनि यस्ता घटनाप्रति धेरै जिम्मेवारी बन्नुपर्छ ।
यस्ता घटना घट्नासाथ राष्ट्रिय मिडियादेखि स्थानिय मिडियाले प्राथमिकता साथ समाचार सम्प्रेषण गर्ने गर्छन् । यही सञ्चार माध्यम मार्फत यस्ता घटनाहरु बेलाबेलामा बाहिर आउने गर्छन् । सञ्चार माध्यम भनेका समाजका ऐना हुन् । सञ्चार माध्यम नहुँदो हो त समाज पुरै अन्धकार जस्तै हुने थियो । आज भोलि त सामाजिक सञ्जालदेखि सबै सञ्चार माध्यममा गलत काम गर्ने र लुकेका कुराहरु छिट्टै बाहिर आउँछन् । अब कसैले पनि गलत काम लुकाउन सक्ने अवस्था छैन ।
सर्वत्र मानव सभ्यतालाई कलङ्कित र स्तब्ध पार्ने यस्ता घटनालाई सरकारले गम्भीररूपमा लिनुपर्छ । घटनामा मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगलगायत धेरै सङ्घसंस्थाले तत्काल अपराधी पत्ता लगाउन सरोकार निकायसँग जोडदार माग गरेका छन् । भागरथी अपराध प्रकरणको अनुसन्धान फितलो हुनु हुँदैन । वर्षौंपछि पनि कतिपय अपराधी कानूनको कठघरामा आएका छन् । यो घटनाका अपराधी पनि कानूनको कठघरामा आउनुपर्छ ।